Dowlada Bulgaria oo ka iibisay Ethiopia, soona raacisay ciidankii ridi lahaa, madaaficda ridada dheer ee taangiyada specialka | Dayniile.com
Home Warkii Dowlada Bulgaria oo ka iibisay Ethiopia, soona raacisay ciidankii ridi lahaa, madaaficda...
Dowlada Bulgaria oo ka iibisay Ethiopia, soona raacisay ciidankii ridi lahaa, madaaficda ridada dheer ee taangiyada specialka
Dowlada Bulgaria ayaa ka iibisay Ethiopia, soona raacisay ciidankii ridi lahaa, madaaficda ridada dheer ee taangiyada specialka ah ku rakiban. Hubkan ayaa ab midkii midawga soviet uu siiyey inta uusan Burburin maadama ay xulafada Warsaw wada ahaayeen.
Wadamada Russia & Bulgaria oo haysta diinta Orthodoxka Masiixiga sida Axmaarada ayaa hub & siyaasad ku taageraya xukuumada Abiy, kadib markay baadariyada Axmaaradu booqasho ku tageen labadaas wadan. Waxaa layaab ah in Tigree laftiisu uu haysto diinta Orthodoxka Masiixiga, malaha muslimiin yeey uga dhigeen?
Ethiopia ayaa taageero hub ka helaysa wadamo siyaasad ahaan col ah, sida Bulgaria & Turkey, Emiratka & Qatar, China & India, Israel & Iran, wali lama garan siday ku dhacday!
Duulaankii Abiy ku dhawaaqay ayaa si hor dhac ah u bilawday, maalmahan ayaa la filayaa inuu si dhaba u bilawdo ayna ka qeyb qaatan saraakiil iyo khubaro kasoo jeeda wadamada sida dhabta ah u taageeraya Kornayl Abiy. Waxaa la xaqiijiyey in saraakiil Iran ahi ay hagayaan Drones ka Iran uu kasoo iibsadey Abiy, halka Russia ay usoo dirtay calooshood u shaqaystayaalka Wagner Group, sidoo kale Bulgaria ayaa saraakiil dhanka madaaficda soo raacisay hubka laga soo iibsadey.
Previous articleGuddiga Doorashooyinka Heer federal oo markii ugu horeysay saakay ku Wajahan magaalada B/weyne
Next articleHogaamiyaha Austria oo xilka wareejiyay kadib cadaadis ka dhashay musuq-maasuq lagu eedeeyay xisbigiisa
Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib u dhiska iyo Guriyeynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Aadan Macalin (Soomaali) ayaa Xafiiskiisa ku qaabilay Wafdi ka socday...